ရှန်ကျန်း MyColor အလှကုန် Co. , Ltd - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
puff & ရေမြှုပ်
"MyColor" လူတိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလှတရားကိုချစ်ကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျနော်တို့မိတ်ကပ်များအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိသည်နှင့်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာအရည်အသွေးမြင့်မိတ်ကပ်စုတ်တံဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ထုတ်လုပ်ဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ဖြစ်ကြသည်။ အကြောင်းကို 10 နှစ် '' အတွေ့အကြုံများကိုပြီးနောက်ယခုများစွာကိုပုဂ္ဂလိကမှိုနှင့်မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင့်ရဲ့ OEM / လိမ္မော်ရောင်အမိန့်ကိုလည်းကြိုဆိုနေကြသည်။
10 နှစျကျြောမိတ်ကပ် brush ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသို့ဖြစ်တော်မူပြီးမှ, CEO ဖြစ်သူ "အန်ဒီဝါသနာရှင်" is quite familiar with the whole industry chain. He remains as committed as ever to creating quality products atareasonable price and helping every people worldwide take control of their own beauty destiny. Then, MyColor Cosmetics Co., Ltd and Jessup Hongkong(Owner of brand"Jessup") reached and formedastrategic cooperation and jointly funded the establishment of Factory"Dongguan Jessup Cosmetics Co.,Ltd., Committed to design, research and development, production and quality control to achieve greater development and help more and more customers and partners to create outstanding values.
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းခွဲစက်ရုံ Dongguan ကျော် 6000 စတုရန်းမီတာ (Dongguan Jessup အလှကုန် Co. , Ltd မှ) ၏ဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း။ ကျနော်တို့အပြည့်အရညျအသှေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိသည်, ISO9001 & ISO4001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်ကိုက်ညီရန်စာရင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
သာ 3-7 ရက်နမူနာစိတ်ကြိုက်လိုအပ်နေပါသည်။5နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူရွေးချယ်မှု, ကျွန်ုပ်တို့၏ 10 R & D အင်ဂျင်နီယာများသင့်ရဲ့အကွာအဝေးကိုချဲ့ထွင်ရန်, စောင့်ရှောက်မြှင့်တင်မိတ်ကပ်ကိုအပြင်းစွာသောအပြိုင်ဆိုင်မှုထံမှထွက်မတ်တပ်ရပ်စေသည်ထားတဲ့ကက်တလောက်ဝှေ့နေတယ်။
အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများနှင့်အဆင့်မြင့်စက်ကိရိယာများနှင့်အတူစက်, Pad ပုံနှိပ်စက်များနှင့်ဖြီးစက်တစ်ခုကိုချုံ့ခြင်းကဲ့သို့ကြှနျုပျတို့ 10,000pcs ကျော်နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ High-စံအရည်အသွေးသည်ငါတို့မှအရင်းအမြစ်ရန်သင့်စိတ်ကိုခိုင်ခံ့စေမည်။ တည်ငြိမ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းမှုနှင့်အတူကျနော်တို့ကုန်ကြမ်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ QC န်ထမ်းများထုပ်ပိုးရှေ့တော်၌အလွန်ဂရုတစိုက်တိုင်းဖြီးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်း။
ဘယျအရာ BRAND WE တစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းလုပ်တယ်ဖူးသလော
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မြင့်မားထိုကဲ့သို့သောရဲ့ MAC, RIMMEL, Bobby Brown, MAYBELLINE နှင့်အမေရိကန်, အီတလီ, သြစတြေးလျနှင့်ဗြိတိန်ဒေသများစသည်တို့ကိုမှ ပို. အဖြစ်အများအပြားကြီးတွေအမှတ်တံဆိပ်ကုမ္ပဏီများ, ကချီးကျူးနေကြသည် ..
သငျသညျ OEM သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြီးမဆိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူးပါ။
Oem Makeup Brushes, Professional Makeup Brushes, Private Label Makeup Brushes, မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်, Oem Makeup Brush Kit, Oem Makeup Brush Set,